BackGround History » Technological University (Monywa)
Technological University (Monywa) was established in 1982 as Technological High School. In 1986 it became Government Technological Institute. In 1999 it was promoted to Government Technological College. In 2007 the school was promoted to university level. Technological University (Monywa) offers Graduate Degree and Post Graduate Degree Programs. Now, Dr.Myo Nyunt (Ph.D-Mining, Pro-Rector) is serving as Rector.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) သည်၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် အစိုးရ စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင်အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအဖြစ်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၉ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ လည်းကောင်းတိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ မဟာဘွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊ အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဘွဲ့ စသည့်ဘွဲ့ပေါင်းများစွာ မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ဒေါက်တာမျိုးညွန့်၊ ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်မှ တာ၀န်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိပါသည်။
စဉ် အမည် ရာထူး/တာဝန် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ
၁၃။ ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ပါမောက္ခချုပ် ၅.၂.၂၀၁၅ မှ ယနေ့အထိ